Ramamimampionona Gérard : “Sehatry ny fifampitokisana ny fifidianana” - ewa.mg
Ramamimampionona Gérard : “Sehatry ny fifampitokisana ny fifidianana”
News - Ramamimampionona Gérard : “Sehatry ny fifampitokisana ny fifidianana”
Nitondra ny heviny
momba ny resaka fifidianana ny eo anivon’ny CFM, amin’ny alalan’ny
filoha lefitra eto amin’ny faritanin’Antananarivo. Ilaina ny
fifanabeazana araka ny nambarany.
iray isian’ny fifampitokisana ny fifidianana. Any dia efa
ampianarina ny olona hoe fifampitokisana ange no dikan’ny hoe
omena olona iray ny vaton’ny tena amin’ny fifidianana. Tokony
hahatoky izay olona omena vato ny tena, ary tsy mivadi-pitokisana
izay omena fahatokisana izay. Anisan’ny ibeazana izany rehetra
izany” , hoy ny filoha lefitry ny Conseil du fampihavanana
malagasy (CFM), faritany Antananarivo, Ramamimampionona Gérard,
amin’izao mbola isian’ny fitarainana etsy sy eroa ny amin’ny
fizarana fanampiana ny vahoaka eny ifotony izao.
Mahatonga korontana ny tsy
Ny tsy fifampitokisana no mahatonga
ny fikorontanana, fihazakazahana sao tsy mahazo fanampiana na misy
lazaina na ahina fa mangalatra na manodinkodina izany.
“Lasa mifanitsy isika
amin’izany“, hoy izy. Anisan’ny fahavalon’ny
fiarahamonina ny tsy fifampitokisana. Tokony hibeazana sy hiainana
izay. Toe-tsaina io, toe-po. Saingy tsy maintsy ampianarina sy
atao hita ary fomba fiasa, fomba fihetsika, fomba fiteny…
Ilaina hatrany ny
Tao anatin’izay 60 taona
niverenan’ny Fahaleovantenan’i Madagasikara izay, mila fanabeazana
be dia be isika. Tsy ny ankizy kely na mpianatra no resahina
amin’izany fa isika isan’ambaratonga sy isan-tsehatra: mibe
isan’andro. Tsy mahamenatra izany. Na fomba fiasa, na fiteny, na
fifandraisana, na fihetsika… Mba hisian’izay fifampitokisana sy
fifampihenoana ary fifamenoana izay.
L’article Ramamimampionona Gérard : “Sehatry ny fifampitokisana ny fifidianana” a été récupéré chez Newsmada.
Voafetra ny fitaterana an-dranomasina, noho ny sakana ara-pahasalamana iadiana amin’ny Covid-19. Vao mainka nanampy trotraka ny haratsian’ny toetr’andro nandritra ny tapa-bolana teo, aty amin’ny tapany atsinanan’ny Nosy. Tsy afaka nihetsika teto amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina ny sambo mpitatitra entana, mamatsy ny any amin’ny tapany avaratr’i Toamasina, tato anatin’ny tapa-bolana farany izao. Vokany, mikatso ny famatsiana ny entana andavanandro ilain’ny mponina. Maro amin’ny entana efa nampidirina tanaty sambo, saika vonona ny handeha, saingy tsy afa-nihetsika ka simba.Sahirana ny mpanangona lavanilaSahirana noho izany ny mponina any amin’ny distrika maro ao amin’ny faritra Analanjirofo, indrindra ny any Mananara Avaratra, i Maroantsetra ary i Sainte Marie, miankin-doha tanteraka amin’ny entana taterin’ny sambo avy aty Toamasina. Sahirana koa ny fitaterana an-tanety any amin’ireo distrika ireo satria tena ratsy ny lalana. Araka ny tatitra azo, tsy ahitana legioma intsony any an-toerana satria lany tanteraka ny tahiry.Nanomboka nisy sambo afaka nitondra entana ihany ny alarobia 29 jolay teo, saingy tsy mbola naharaka amin’ny famatsiana any an-toerana. Tsy afaka niasa koa ny mpanjono any an-dranomasina, nandritra izay tapa-bolana naharatsy ny andro izay. Sahirana noho izany ny mpandraharaha mpanangona lavanila any amin’ny tantsaha.Sajo sy Njaka A.L’article Faritra Analanjirofo: mikatso ny famatsiana entana a été récupéré chez Newsmada.
Andrasana izay ho fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana, amin’ny hanohizana na tsia ny ”fahamehana ara-pahasalamana” vokatr’ity covid-19 ity. Nandavo olona 29 sy nahitana tranga vaovao 1 840 izany valanaretina izany tamin’ity herinandro ity.Hiditra amin’ny hamehana ara-pahasalamana manaraka indray isika, manomboka ny alahady izao. Mialoha izany, nana­marika iny herinandro iny ny hamaroan’ireo lavon’ny Covid-19. Miisa 29 izany, nanomboka ny 1 aogositra hatramin’ny omaly, ka manodidina ny telo na efatra isan’andro eo ho eo izany. Niavaka kosa anefa ny antontanisa ny alakamisy lasa teo fa miisa fito ireo lavo. Anisan’ny ambony koa, taorian’ny tamin’ny 16 jolay, nahafatesana olona miisa 10, tao anatin’ny iray andro izany. Tsy mifanalavitra amin’izany koa anefa ny teo anelanelan’ny 25 hatramin’ny 31 jolay. Nahatratra 30 ny isan’ireo nodimandry noho ity valanaretina ity. Hatreto aloha izany, tafakatra 136 ireo lavon’ny Coronavirus eto amintsika.1 840 ireo nifindran’ny valanaretina Etsy andaniny, miisa 1 840 ireo nifindran’ny valanaretina, hatramin’ny fiantombohan’ny volana aogositra ity hatramin’ny omaly. Ni­songadina indrindra tamin’izany ny voalohan’ny volana teo iny. Nahatratra 405 ireo tranga vaovao. Raha tsiahivina ny antontanisa, omaly, iray ny lavon’ny Covid-19. Notsaboina tany amin’ny faritra Atsi­nanana. Miisa 182 ireo tranga vaovao ka mbola ivon’ny valanaretina sy ny « frome grave » hatrany ny eto Ana­lamanga. Miisa 141 izany raha sivy ny any Matsiatra Ambony. Valo ny any Ihi­rombe ary fito ny any Atsimo Andrefana. Enina kosa ireo tranga vaovao any Boeny raha telo ny any Menabe. Ahitana tranga vaovao roa avy ny any amin’ny faritra Itasy sy Amoron’i Mania ary i Betsiboka. Iray avy ny any Atsinanana sy ny faritra Sofia.Andrasana ny fanapahan-kevitra sy ny fepetra Miisa 93 ireo marary mafy ka avy eto Analamanga ny 75 amin’izany. Mitsinjara ho 37 etsy Befelatanana. Sa­my ahitana 16 avy eny amin’ny HJRA sy eny Anosiala. Miisa efatra ireo marary mafy eny Fenoarivo ary roa kosa ny eny amin’ny Homi, Soavi­nan­driana. Manampy ireo ny any amin’ny faritra Matsiatra Ambony, miisa 10 raha enina any Boeny ary iray kosa ny « forme grave » any Betsi­boka. Araka izany, andrasana ny mety ho fanapahan-kevitry ny fitondrana sy ny fepetra manoloana ireo antontanisa ireo, indrindra ho an’ny eto Analamanga.Synèse R.L’article Miisa 1 840 ireo tranga vaovao…: 29 ireo lavon’ny Covid-19 tao anatin’ny herinandro a été récupéré chez Newsmada.
Mbola ambentin-dresaky ny mpitia fanatanjahantena, indrindra fa ny mpankafy baolina kitra, ny sokajy misy ny Barea de Madagascar, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika «Can 2019». «Azo atao tsara ny vondrona misy antsika», hoy ireo teknisianina. -I Debon Jean-François (tale teknika nasionaly)Azo atao tsara, raha ireo mpifanandrina amin’ny Barea ireo fa miankina amin’ny fahavononana sy ny paik’ady apetraky ny mpanazatra fotsiny sisa. I Nizeria no heverina fa ho mafy, saingy azo resena ihany koa. Na izany aza, afaka miady ny toerana faharoa ny Barea ary tokony ho tafavoaka amin’ity vondrona B ity.Mino aho fa anisan’ireo ekipa 16 hiatrika ny dingana ampahavalon-dalana ny Barea de Madagascar, amin’ity, raha lazaina ny lojikam-baolina. – Odon Michel (mpanazatra Jet Mada)Ny sarotra, ao amin’ity sokajy ity, i Nizeria izay manao baolina anglisy, izany hoe, matanjaka. Raha ny hevitro, hiadiana ny toerana faharoa. Miankina amin’ny voka-dalao eo amin’ireo lalao roa voalohany ihany koa anefa io. Mandeha io raha vao tsara fanombohana. Azo atao tsara izany ny miakatra amin’ny dingana faharoa.Feno fanantenana aloha ny tenako fa mbola hahita ny Barea de Madagascar, eo amin’ny fihodinana faharoa, amin’ity “Can 2019 ity. Tsy tokony ho sakana mihitsy i Ginea sy i Borondi. -I Raux Auguste (mpanazatra Uscafoot)Raha ny vokatry ny fisarihana aloha, nahazo vondrona mora ny Barea. Miankina amin’ny fanomanana sy ny paikadin’ny mpanazatra ny herijika hiakarana amin’ny fihodinana faharoa. Na izany aza, mila mailo ihany satria mahay koa ireo mpifanandrina ireo matoa tafita hiatrika ny “Can 2019” ka tsy tokony hambaniana.Mitovy hevitra amin’ny rehetra aho fa mba anisan’ireo ekipa miakatra amin’ny fihodinana faharoa ny Barea de Madagascar, amin’ity. Mirary soa ho azy ireo hahavita dingana lavidavitra kokoa, amin’ity “Can 2019” ity. Nangonin’i Tompondaka L’article Kitra – «Can 2019»: «Tsy tokony ho olana ny hiakarana amin’ny fihodinana faharoa», hoy ireo teknisianina a été récupéré chez Newsmada.
Cites: dinihina ny fitantanana ny andramena
Hatao any Genève, Soisa, amin’izao fotoana izao, ny fivoriamben’ny Sampandraharaha iraisam-pirenena mitantana ny varotra harena voajanahary tandindomin-doiza (Cites). Fivoriambe andiany faha-71, ataon’ireo vaomiera maharitra. Mandray anjara amin’ity fivoriana ity i Madagasikara ary anisan’ny tatitra atao any ny mikasika ny fitantanana ny hazo sarobidy, izay tsiahivina fa voasazin’ny Cites tsy mahazo mikapa, tsy mahazo mitatitra, tsy mahazo mivarotra eto an-toerana sy manondrana any ivelany isika hatramin’izao.Anisan’ny notaterin’i Madagasikara nandritra ity fivorian’ny vaomiera maharitra ity ny fampiharana ny lalàna mikasika ny fanimbana ny ala, ny fitantanana ny tahiry sarobidy giazan’ny fanjakana ka ao anatin’izany ny andramena sy ny voamboana. Naroso teo anivon’ny mpivory koa ny vinan’ny fanjakana mikasika ity sehatra ity. Nankatoavin’ny mpanatrika ny tatitr’i Madagasikara ary nodinihin’ny Fivoriamben’ny isaky ny solontena mpandray anjara (Conférences des parties) andiany faha-18, nanomboka, omaly alatsinainy.Hatao lavanty amin’ny mpanao asa tananaEtsy ankilany, nilaza ny minisiteran’ny Tontolo iainana sy ny ala fa anisan’ny vinavinan’ny fanjakana ny hanaovana lavanty ireo andramena giazana amin’izao fotoana izao, ho an’ny mpanao asa tanana eto an-toerana. Tsiahivina fa nitsahatra ny tena trafika andramena goavana nakany ivelany, nanomboka ny taona 2015. Anisan’ny tratra farany ny bolabola maherin’ny 30 000 tany Singapour, saika haondrana tany Sina, ny marsa 2014. Giazana any an-toerana ireo hazo ireo hatramin’izao. Eny amin’ny Fitsarana miady amin’ny kolikoly kosa ny raharaha ho an’ireo olona voarohirohy eto an-toerana.Njaka A.L’article Cites: dinihina ny fitantanana ny andramena a été récupéré chez Newsmada.
Efa eo am-piomanana tanteraka amin’ny fifidianana izay ho filoha vaovao hitantana ny seksiona ankehitriny, ny eto Antananarivo Renivohitra taranja Karate. Tapitra amin’ity taona ity mantsy ny fe-potoana hitondran’ny mpitantana am-perinasa ka tsy maintsy miroso amin’ny fifidianana, araka ny nambaran’ny filohan’ny ligin’Analamanga Karate, Rakotomalala Jean Paul. Araka izany, mitaona ireo klioba rehetra eto Antananarivo Renivohitra ny federasiona, hanontany izay tokony ho fantatra mahakasika ny “certificat de conformité”. Voakasika izany avokoa na ireo efa mijoro ara-dalana na tsia, raha ny fanazavana hatrany. Eny amin’ny Delegen’ny tanora sy fanatanjahantena Antananarivo Renivohitra etsy Ambohidahy ny hahafahana mahazo fanampim-panazavana mahakasika izay.Raha ny tokony ho izy, ny volana aogositra ny fotoana efa napetraka hanaovana ity fifidianana ity, saingy tsy tontosa izany noho ny toe-draharaha ara-pahasalamana teto amin’ny firenena. Araka ny loharanom-baovao, maro ny hirotsaka amin’ity indray mitoraka ity, mbola tsy fantatra kosa raha mbola ho isan’ny ho kandida ny filoha am-perinasa na tsia. Mi.RazL’article Karate – Antananarivo: efa miomana amin’ny fifidianana a été récupéré chez Newsmada.
“Show case”: ho ao amin’ny Code 110 i Big Jim Da
Mikarakara seho miavaka ny « Cod Wear », izay iarahana amin’i Big Jim Da, ny asabotsy 26 septambra, amin’ny 8 ora sy 20mn hariva, ny ao amin’ny Code 110 KaraokeBar na Hotel Gasy Tanamasoandro-Vatofotsy, Antsirabe. Mpihira manana ny lanjany eo amin’ny tontolon’ny mozika malagasy, indrindra ny sehatry ny Hip Hop ny lehilahy. Anisan’ny zokibe eo amin’ny tontolon’ny rap malagasy i Big Jim Da, ary nanamarika ny fahazazan’ny tanora ankehitriny, raha tsy hilaza afa-tsy ny hira “Sedra”, ny « Jaolahy mpiarakandro”, ny « Sentiment anabo poah », ny « Menimeny » sns… Hovelomina amin’io andron’ny fampisehoana io avokoa ireo hira ireo, miampy ny hira vaovao tsy ampoizina. Marihina fa noho ny hamehana ara-pahasalamana vokatry ny covid-19 dia noferana ho olona 100 ihany no afaka manatrika izany hetsika izany, araka ny toromarika ary manaja ny fepetra ara-pahasalamana.NarilalaL’article “Show case”: ho ao amin’ny Code 110 i Big Jim Da a été récupéré chez Newsmada.